US oo ka hadlay weerarkii Baraawe - BBC Somali
US oo ka hadlay weerarkii Baraawe
Image caption al-Shabaab waxa ay sheegeen inay iska caabiyeen weerarka Mareykanka
Mareykanku waxa uu sheegay in weerarkii uu ku qaaday Soomaaliya 5 September in bartilmaameedku ahaa hoggaamiye ka tirsan kooxda xagjirka ah ee al-Shabaab oo loo yaqaan Abdulqaadir Maxamed Abdulqaadir, laguna naaneeyso Ikrima.
Ilaa weerarkaasi oo ku guuldareystay inuu soo qabto ninkaasi, dadka ka faalooda Soomaaliya horey uma aanay maqlin Ikrima.
Waxaa la aaminsan yahay Kenyan asalkiisu Soomaali yahay, oo ka tirsan Kenyan Soomaali badan iyo dagaalyahaniin ajnabi ah oo ku biiray kooxda al-Shabaab.
Dadka deggan magaalada Barawo, ee weerarku ka dhacay ayaa sheegay in Ikrima uu yahay hoggaamiyaha xagga saanadda uga masuulka ah al-Shabaab.
Inta badan waxaa ilaaliya oo la socda ilaa 20 qof oo hubeysan, sida ay dadka deegaanku sheegeen.
Sida dadka kale ee Kenyan Soomaalida ah, waxaa la aaminsan yahay inuu ku hadlo Sawaaxili oo uu kaga wanaagsan yahay Soomaaliga, isla markaana uu awoodo inuu si xor ah ugu safro labada dalba.
Sida inta badan kooxaha islaamiyiinta xagjirka ah, waxa ay u badan tahay inuu af Carabina ku hadlo - dadka deggan magaalada Baraawe qaarkood waxa ay sheegeen inay markii hore uba haysteen inuu ka yimid Libya.
Ikrima ayaa ah nin isku xira al-Shabaab iyo al Hijra oo ah koox Kenyan ah oo sidoo kale loo yaqaan Xarunta dhallinyarad muslimka. Waxaa uu dhexgali karaa Soomaalida iyo Kenyan-ka labadaba iyo dagaalyahaniinta ajnabigam sida uu wargeyska Washington Post u sheegay Matt Bryden oo ka faalooda arrimaha Soomaaliya.
Inkasta oo magaciisa aan la aqoon wixii weerarkii Sabtida ka horreeyay, waxaa lagu xusay warbixin sanadkii hore ay sameeyeen sirdoonka Kenya, oo loo gudbiyay saxaafadda Mareykanka, kadib weerarkii bishii hore lagu qaaday xaruntii ganacsiga ee Westgate ee Nairobi.
Waxaa lagu tilmaamay inuu ahaa ninka hoggaaminayay qorshaha shirqool ay joojiyeen hoggaanka al-Qaacidda ee Pakistan oo lagu qaadi lahaa weerarro Kenya dhamaadkii 2011 iyo 2012.
Dhismaha baarlamaanka Kenya, Xafiiska Qaramada Midoobay ee Nairobi, iyo weliba xeryo militeri oo ciidamada Kenya leeyihiin iyo restaurant ay Itoobiyaan leeyihiin oo inta badan ay tagaan xubno ka tirsan dowladda reer galbeedku taageero ee Soomaaliya .
Masuuliyiinta Kenya waxay sheegeen in dhammaan ay fashiliyeen shirqoolladaasi.
Afhayeen u hadlay xafiiska gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon, Goerge little ayaa sheegay in Ikrima uu xiriir hoose la lahaa Harun Fazul iyo Saalax Ali Saalax Nahban, kaasi oo uu sheegay inuu door ka cayaaray weerarkii safaarada Mareykanka ee Nairobi iyo weerarradii 2002 ee hotel iyo shirkad ku taal Mombasa.